လိမ္မော်ရောင်ဖြင့်ဆီမီးခွက်မည်သို့လုပ်ရမည် - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> အိမ်လုပ်စမ်းသပ်ချက် >> လိမ္မော်ရောင်ဆီမီးခွက်တစ်ခုလုပ်နည်း
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလိမ္မော်ရောင်နဲ့ဆီနည်းနည်းပဲသင်ပေးတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆီမီးခွက်ကိုယူ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း။
အမှန်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထွန်းလင်းစေသည့်အရာမဟုတ်သော်လည်းညအချိန်တွင်အလှဆင်ခြင်းကဲ့သို့လှပသည်။ သင်ရင်ခုန်စရာညစာစားလိုလျှင်သို့မဟုတ်ချင်လျှင် သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်အတူနေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာတွင်သိလိုစိတ်ကိုပြပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏မီးခွက်ကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါပစ္စည်းများသာလိုအပ်လိမ့်မည်။ လိမ္မော်ရောင်နဲ့ဆီအနည်းငယ်တို့၊ ငါသူတို့အချို့ကိုယူပြီးချက်ပြုတ်ဖို့အသုံးပြုပြီးပြီ။ ဒါကငါတို့ပြန်လည်အသုံးပြုပုံ ;-)
ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကအရေပြားကိုအရေပြားကနေဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့ပါပဲ လိမ်မော်သီး2ရှက်သို့ခွဲထုတ်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓါးဖြင့်မှတ်ပြီးလက်ချောင်းဖြင့်ခွဲထားသည်။ ဗီဒီယိုတွင် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားဖို့အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမီးစာအဖြစ်အသုံးပြုမှာပါ။ ဒီအပိုင်းကိုသေချာအောင်ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်၊ ဒါကြောင့်မပြိုကွဲအောင်နဲ့ဆီနောက်ကျသွားမယ်။
ဒီနှင့်အတူသင်လက်တွေ့ကျကျဖြစ်ကြသည် မီးခွက်ကိုလက်စသတ်။ ငါတို့၏ "မီးစာ" သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရေတွင်စိမ်အောင်သေချာစွာအတွင်း၌ဆီကိုသွန်းရမည်။
ဒါပေမယ့်ဗွီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရလိမ့်မယ်။ ငါတို့နောက်သို့မလိုက်လျှင်၊ subscribe အပတ်စဉ်ဗီဒီယိုကိုစတင်ချင်ပါတယ်
ဒီမှာငါသည်လည်းလိမ္မော်ရောင်ဓာတ်ပုံအချို့ကိုချန်ထားသည်။ အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် ဖယောင်းတိုင်, မီးခွက်သို့မဟုတ်ဆီမီးခွက်
LEGO Boost ဆိုတာဘာလဲ
3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းအတွက် စုစုပေါင်းအစပြုသူများလမ်းညွှန်
Carolina Reaper (သို့) Carolina Reaper
categories အိမ်လုပ်စမ်းသပ်ချက် လက်မှတ်အညွှန်း
Airless သို့မဟုတ် Non-pneumatic ဘီးများ
မြဝတီ။ သင်၏ DIY Open Source ကားကိုတည်ဆောက်ပါ
9 comments "လိမ္မော်ရောင်နဲ့ဆီမီးခွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ"
6:2014 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 7, 53
12:2014 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 2, 45
မတ်လ 12, 2014 တွင် 2:57 pm မှာ
15:2014 pm မှာမတ်လ 10, 13
ummm, ဒါပေမယ့်ဒါကလိမ္မော်ပဲ၊ လိမ္မော် ummm မဟုတ်ဘူး
20:2014 pm တွင်မေလ 8, 09
Nice နှင့်ကြွယ်ဝသော Citrus ၏အနံ့ကိုခံစားရမည်
1:2014 pm မှာဇူလိုင်လ 6, 53 တွင်
ဒါဟာ turnip နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် ... ?
3:2014 pm မှာသြဂုတ်လ 11, 50 တွင်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုအလွန်အေးမြ။ ကျောင်းစီမံကိန်းတွင်တင်ပြရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါပေမယ့်ငါနောက်ထပ်သစ်သီးတစ်မျိုးသုံးလို့ရမလားသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
5:2014 pm မှာသြဂုတ်လ 10, 49 တွင်
ကောင်းပြီ၊ လိမ္မော်သီးကိုအရေးကြီးစေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကငါတို့ကမီးစာအဖြစ်ကျန်ရှိနေတဲ့အမြီးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တယ်။ သင်၌ citrus အပြင်သင်၌ဤလက္ခဏာများပါသောအခြားအသီးများရှိသလားမသိပါ။ သင်စမ်းကြည့်ပါကကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
8:2015 pm မှာသြဂုတ်လ 12, 50